मेसीको स्थान लिने तीन खेलाडी | Hamro Khelkud
एजेन्सी – बार्सिलोनाले अबको तीन साता आफ्नो कप्तान लिओनेल मेसीको साथ पाउने छैन । लिग अन्तर्गत शनिबार सेभिल्लाविरुद्ध हातमा चोट बोकेपछि मेसी मैदानबाहिर रहने भएका हुन् ।
मेसीको चोटसँगै बार्सिलोना समस्यामा पारेको छ । क्लबले अब मेसीको स्थानमा खेल्न उचित खेलाडी छनोट गर्नुपर्ने छ । बार्सिलोनासँग मेसीको स्थानमा पर्याप्त विकल्प छन् । तीमध्य उचित तीन खेलाडी यसप्रकार छन् :
३. फिलिपे कोउटिन्हो
२६ वर्षीय ब्राजिलियन मिडफिल्डर बार्सिलोनाको इतिहासकै महँगा खेलाडी हुन् । बार्सिलोनाले उनलाई आन्द्रेस इनिएस्टाको भूमिका पुरा गर्न क्लबमा ल्याएको थियो । उनले त्यसैअनुसार प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । हालसम्म कोउटिन्होले २७ खेलमा ११ गोल गरेका थिए । उनले यस सिजन ३ असिस्ट प्रदान गरिसकेका छन् । पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट गोल गर्न उनी माहिर छन् । लिभरपुलमा रहँदा यसै किसिमको भूमिका निर्वाह गरिसकेका कोउटिन्हो बार्सिलोनामा पनि सोहि प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा हुनेछन् ।
२. ओस्मान डेम्बेले
विश्वकप विजेता डेम्बेलेलाई बार्सिलोनाले अघिल्लो सिजन नेयमारको स्थान पुरा गर्न ल्याएको थियो । चोटका कारण पहिलो सिजनमा आफ्नो कौशल देखाउन नपाएका डेम्बेले यस सिजन राम्रो लयमा छन् । विश्वकपमा पनि उनले फ्रान्सका लागि राम्रो प्रदर्शन गरे । सुपर कपमा सेभिल्लाविरुद्ध गोल गरेका उनले अगस्टमा लगातार ४ खेलमा गोल गरेका थिए । मेसीको चोट बार्सिलोनाका लागि पक्कै सुखद होइन । तर डेम्बेले मेसीको अनुपस्थितिमा प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो प्रभाव देखाउन पक्कै आतुर हुनेछन् ।
१. लुइस सुआरेज
पछिल्लो ८ वर्षमा मेसी र रोनाल्डोबाहेक गोल्डेन बुट जित्ने सुआरेज एक्ला खेलाडी हुन् । उनले सन् २०१४ मा लिभरपुल छाडेर बार्सिलोना आएदेखि नै लगातर गोल गर्दै बार्सिलोनालाई उपाधि दिलाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय लयमा नरहेका सुआरेजले सेभिल्लाविरुद्ध पेनाल्टीमा गोल गर्दै खडेरी तोडेका छन् । अब मेसीको अनुपस्थितिमा गोल गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुआरेजमा आएको छ । उनले मेसीको कमि महसुस हुन नदिन बार्सिलोनाको आक्रमणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।